日本で、5年間、はたらく!!! | ဂ်ပန္အလုပ္!
ဥပဒေအရ (ကျွမ်းကျင်လုပ်သား) စနစ်အသစ်မှာ ၊ ဂျပန်မှာအလုပ် လုပ်ရန် ပိုမို လွယ်ကူချောမွေ့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစနစ်မှာဆိုရင် အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားနှင့် နည်းပညာသင်တန်းသားများ
ထက် မြန်မာလူမျိုးများဘက်မှပို၍ အကျိူးကျေးဇူးများစွာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
– ဂျပန်လူမျိုးများနှင့် တန်းတူလစာရရှိနှိင်ခြင်း
–5နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း
– တူညီသောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်လျှင် အလုပ်နေရာပြောင်းရွှေ့နိ်ုင်ခြင်း
– ဟင်းလျာချက်ပြုတ်ခြင်း ၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးသောလုပ်ငန်း ၊ ဟော်တယ်နှင့်အရောင်းဆိုင်များ စီမံခန့်ခွဲမှု စသောလုပ်ငန်းများက လုပ်ကိုင်ခွင့် အသစ်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
※ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အကဲဖြတ်စာမေးပွဲနှင့် ဂျပန်စာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT N4 အောင်မြင် ပြီးသူများကင်းလွတ်သည် ) အောင်မြင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
ဂျပန်မှာ 5နှစ်တာ စိတ်ချယုံကြည်စွာအလုပ် လုပ်ကိုင်လိုသူများ၊ ယခုချက်ချင်းပဲ အောက်ပါ အတိုင်း စာရင်းသွင်းကြရအောင်နော်။
※Please enter your information in English or Japanese.
Passport name なまえ(*required)
Phone Number(Viber) でんわばんごう(*required)
1.Open Facebook on your mobile device, navigate to the own profile page, and click "More".
2.Select "Copy Link to Profile".
3.Copy the link. Please paste here↓↓↓
email address [example@gmail.com]
Date of birth / 生年月日（YYYY/MM/DD/）
School name（or Occupation）/ 学校名（または職業）
None JLPT N5 JLPT N4 JLPT N3 JLPT N2 JLPT N1
※Only Japanese resident
Types of Status	在留資格（VISA)
None Student 留学 Designated Activities 特定活動 (Refugee)難民ビザ申請中 Technical Intern Training 技能実習 Other その他
住所（adress) Where do you live in now?[(ex)Tokyo,Fukuoka,,,,,]
Please add any comments（Message）
၀င္ေၾကးးအခမဲ့　参加費：無料
ေဟာေျပာပြဲမွာ ပါ၀င္လို႕၊ ဂ်ပန္တြင္5ႏွစ္အလုပ္ လုပ္ၾကစို႕။
ထို့အပြင် ကျွနု်ပ်တို့ထံ၌ သာလျှင် ရရှိနိုင်သော ၊အထောက်အပ့ံနှင့် ကောင်းကျိုးများ
လူကြိုက်များ ကျော်ကြားသောစားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေရဲ့ ကုမ္ပဏီများကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တူညီသောလုပ်ငန်းအမျိုးစားမှာ အတူတကွအလုပ် လုပ်ကိုင်နေသော ဂျပန်လူမျိူးများနှင့် တန်းတူလစာရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးဝန်ထမ်းများနှင့်လည်း အတူတကွစိတ်ချယုံကြည်စွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း
– လုပ်ငန်းခွင်မှ မန်နေဂျာမှာ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ခြင်း ၊ မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ နားလည်မှုရှိ စွာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း။
မြန်မာလူမျိုးအတိုင်ပင်ခံနှင့် ဆွေးနွေးထောက်ပ့ံမှု ရှိပါတယ်
– လုပ်ငန်းကိစ္စသော်လည်းကောင်း ၊ လူနေမှုဘဝမှာသော်လည်းကောင်း ၊ အဆင်မပြေမှုများ
– ဂျပန်ဘာသာ/စကားကို အွန်လိုင်းမှတဆင့် အခမဲ့ လေ့လာဆည်းပူးနိုင်ပါတယ်။
– လုပ်ငန်းပိုင်းနှင့်ဆိုင်သော လက်ဆွဲစာအုပ်မှာလည်း မြန်မာဘာသာဖြင့် လေ့လာနိုင်သောကြောင့် လျင်မြန်စွာ အလွယ်တကူ မှတ်မိနိုင်ခြင်း။
– ဂျပန်ရဲ့လူနေမှုဘဝနှင့်ဆိုင်သော အချက်အလက် သတင်းလွှာများအား လစဉ်မြန်မာဘာသာဖြင့် ရ ရှိနိုင်ခြင်း။
– ဂျပန်တွင်5နှစ်တာ ကုန်ဆုံး၍ တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ရောက်ပြီးနောက်တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ အလုပ်ရရှိရန် အကူအညီပေးနို်င်ခြင်း။
မိတ်ဆက်ပေးခ0ယန်း
ဒါ့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေမိတ်ဆက်ပေးမှုအတွက် အခကြေးငွေ လုံးဝ မယူပါ။
※စာမေးပွဲအောင်မြင်စွာဖြေဆိုနိုင်ရန်အတွက်လည်း လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
……အဲ့လိုအ့ံသြဖွယ် အခြေအနေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရရှိဖို့အတွက် ယခုကအချိန်ကောင်းပါ။
ဒီလို ကိစ္စမျိုးတွေမှာ သင်တွေဝေနေသလား?
– ဂျပန်မှာ အလုပ် လုပ်ချင်သော်လည်း မည်သို့စတင်လုပ်ဆောင်ရမှန်း နားမလည်ခြင်း။ …
– မည်သူနှင် ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမည် ဆိုတာ နားမလည်ခြင်း။ …
– ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းအား မသိခြင်း။ နားမလည်ခြင်း။း …
– လိမ်ညာလှည့်ဖျား၍ အတင်းအကျပ် စေခိုင်းမခံလိုခြင်း။ …
– ဂျပန်နှင့် ပတ်သက်၍ မိမိယုံကြည်ရမည့်သူ မရှိခြင်း။ …
ကျွန်တော်တို့ဘက်မှ ၊ မြန်မာလူမျိုးများအား ကူညီခြင်းအကြောင်းပြချက်
ကျွန်တော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေစက်ကတော့ ဂျပန်ကိုပညာတော်သင်လာတဲ့ မြန်မာ
ကျောင်းသား တစ်ဦးနှင့် ဆုံတွေ့ရာကစတင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုအချိန်က စားသောက်ကုန်် ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံနှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းကို
လုပ်ကိုင်နေခဲ့ပြီး လက်ရှိ ဂျပန်နိုင်ငံကဲ့သို့ပင် ၊ လုပ်သားမလုံလောက်မှုပြဿနာက်ို ရင်ဆိုင်ရင်း အိပ်ချိန်မရှိ လောက်အောင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေခဲ့ချိန် ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့လိုအချိန်မှာပဲ မြန်မာလူငယ် ပညာတော်သင်ကျောင်းသားတစ်ယောက်က အချိန်ပိုင်းအ လုပ်သမားအနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။
ထိုလူငယ်က မိမိအလုပ်ကို အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရုံသာမက တခြားထူးချွန်သော ကျောင်း သားအချို့ကိုပါ လုပ်ငန်းခွင်သို့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ထိုလူငယ်က ပညာသင်ကျောင်းသား အချိန်ပိုင်းအလုပ်သမားတွေ ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပြီး ၊ စားသောက်ကုန်စက်ရုံနှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းခွင်မှာပါ ဦး
ဆောင်၍ လုပ်သားမလုံလောက်မှုပြဿနာကိုနောက်ကွယ်မှ ကူညီဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုလူငယ်ဘွဲ့ရလို့ မြန်မာပြည်ပြန်တော့မယ့်အချိန်မှာ ကျွန်တော်က [ ငါတို့ကိုကူညီခဲ့တဲ့ မင်းအတွက် တို့ဘက်ကလုပ်ပေးနိိုင်တာများ မရှိဘူးလား] လို့မေးတဲ့အခါ
[ မြန်မာလူမျိုး တွေကို ဂျပန်မှာ အလုပ် လုပ်နိုင်အောင်ကူညီပါ ] လို့သူ့ဆန္ဒကိုဖွင့်ဟလာပါတယ်။ ထိုလူ ငယ်ရဲ့စိတ်ကူးကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ရန် 2013 ခုနှစ်မှာ မြန်မာပြည်ဘက်ကိုတိုးချဲ့ ပြီး လက်ရှိလုပ်ငန်းများကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်မှာလည်း အလုပ် လုပ်နိုင်တဲ့လူဦးရေ လျော့နည်းလာခြင်းကြောင့်၊ အလုပ်သမား မလုံလောက် မှုက လေးနက်သောလူမှုရေးပြဿနာတစ်ခ ုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တစ်ဘက်မှာလည်း မိမိတို့လုပ်အားနှင့်ထိုက်တန်သောဝင်ငွေမရရှိသောကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံ သို့သွားရောက်အလုပ် လုပ်ကိုင်လိုသော မြန်မာပြည်မှ လူငယ်အများအပြားရှိနေပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့် မြန်မာနိိုင်ငံမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့
အဆက်အသွယ်တွေကို အားသာချက်အနေဖြင့် အသုံးချပြီး မြန်မာ့လူနေမှုဘဝတိုးတက် ရန်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ အလုပ်သမားရှားပါးမှု ခံစားနေရသော လုပ်ငန်းခွင်များကြား အပြန်အ လှန်ကူညီနိုင်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Yangon Office 251/253,Room-8/B,Bo Myat Htun Street,
2013 ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှ ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်ရရှိထားသော ပြည်ပလုပ်သားပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီနှင့် အကျိုးတူပူပေါင်း၍ ရန်ကုန်၌ ဂျပန်မှ တာဝန်ခံကို စေလွှတ်ပြီး လုပ်ငန်းများရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်ကုမ္ပဏီပိုင် စာသင်ခန်းများနှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဂျပန်ဘာသာ၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ကိုက်ညီသောဂျပန်စကား သင်ကြားပေးခြင်း ၊ ထို့အပြင် ဂျပန်၌်လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်သည်အထိ အထောက်အပ့ံ ပေးခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက မြန်မာလူမျိုးများ ဂျပန်တွင် လွယ်ကူစွာ အလုပ် လုပ် ကိုင်နိုင်ရန် မိတ်ဆက်ပေးရုံ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ပေးရုံ သက်သက်မျှသာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင်အား ဂျပန်တွင်လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်ချိန်မှစတင်၍ အကြောင်းကြားဆက်သွယ်ပေးပြီး၊ လုပ်ငန်းပိုင်းတွင် သော်လည်းကောင်း ၊ နေထိုင်မှုပိုင်းတွင် သော်လည်းကောင်း ၊ အစစအရာရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
ဂျပန်တွင် နေထိုင်စဉ်ကာလတစ်လျှောက် လုံခြုံစိတ်ချစွာ အလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းကလည်း ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ပေးခြင်း ၊ နေထိုင်မှုကာလသတ်မှတ် ချက်နှင့်ဆိုင်သောပြဿနာများအား လျင်မြန်စွာဖြေရှင်းပေးခြင်း စသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်တွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရသော လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အချိန်ကြာမြင့်ပါတယ်။
တောက်ပတဲ့အနာဂါတ်ဆီသို့ ဦးတည်ဖို့အတွက် ပထမခြေလှမ်းက အရေးကြီးပါတယ်။
ဂျပန်မှာ5နှစ်တာ စိတ်ချလုံခြုံသော လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ချင်သူများ ယခုချက်ချင်းပဲ အောက်ပါပုံစံမှ အချက်အလက်များ ရယူကြရအောင်နော်။
Where do you live in now? いま、住んでいる国は？(*required)
Live in Myanmar ミャンマーに住んでいる 日本に住んでいる Live in Japan other
name なまえ[Passport Name](*required)
住所（adress) Where do you live in now?[(ex)Tokyo,Fukuoka,,Yangon,,,]
担当：ヒラオカ : Hiraoka